H&M – FemaleWear.net
Fashion Trends and News, World & Local
H&M နဲ့ MOSCHINO တို့ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အမိုက်စား ဒီဇိုင်းများ
HM x Moschino
ဒီ ၂၀၁၈ ခုနစ်အတွင်းမှာဆိုရင် နာမည်ကျော် ဖက်ရှင်ကုမ္မဏီအများစုက သူတို့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေထက် ကျော်ကြားတဲ့ ဒီဇိုင်နာတွေနဲ့ပူးပေါင်းကာ ဈေးကွက် အပြိုင်အဆိုင် ချဲ့လာကြပါတယ်။ အခုလည်း H&M နဲ့ Moschino တို့ ပူးပေါင်းလိုက်ပါပြီ။ ဒီကုမ္မဏီကြီးနှစ်ခု ပူးပေါင်းပြီး နောက်ဆုံးပေါ် အမိုက်စား ဒီဇိုင်းတွေကို ဒီနိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲ စတင်ရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် ဒီဇိုင်းနဲ့…
H&M ရဲ့ Brand အသစ် Nyden ပထမဆုံးအကြိမ်စတင်ရောင်းချ
Brand အသစ်ဖြစ်တဲ့ Nyden ကိုတော့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလမှာ Brand name ကို H&M ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး millennials အရွယ်တွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nyden ဆိုတာကတော့ ဆွီဒင်စာလုံးဖြစ်ပြီး “ny” “den” ကို “new” “it” လို့အမည်ရပါတယ်။ Brand ရဲ့…
Kate Middleton ရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံပုံစံကို ပြန်လည်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ H&M
ဒီနှစ်ထဲမှာ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ H&M ကထုတ်လိုက်တဲ့ Wedding dress ကို သတိရသင့်ပါတယ်။ H&M က မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးတွေကို မြင်လိုက်တာနဲ့ တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်သွားမှာလည်း အသေချာပါဘဲ။ အခုနောက်ပိုင်း H&M ကနေ ထက်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံကတော့ Kate Middleton ဝတ်ဆင်ခဲ့သော မင်္ဂလာဝတ်စုံကို ပုံစံတူပြန်လည်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနေကြပါတယ်။ စျေးနှုန်းအရလည်း $299 ဆိုတော့ သတို့သမီးတစ်ယောက်အတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ထဲမှာ…
The Weeknd က H&M နဲ့ collaboration ကို ဘာကြောင့်ဖျက်ပစ်ခဲ့တာလဲ?
The Weeknd ကတော့ သူ့ရဲ့ relationship ကို H&M နဲ့ အဆုံးသတ်တယ်လို့ ပြောရမလားဘဲ မကြာခင်အချိန်ကဘဲ The Weeknd နဲ့ H&M တို့ Collaboration လုပ်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ H&M ရဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးထိခိုက်စေနိုင်သော ’Coolest Monkey…
H&M ကနေ မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Brand New “Nyden”
၂၀၁၈ အစောပိုင်းမှာ H&M ကနေ announce လုပ်လိုက်တဲ့ brand အသစ်ကတော့ Nyden ဆိုတဲ့ brand ဖြစ်ပါတယ်။ Nyden ကို Swedish word အနေနဲ့ ‘new’ and ‘it’ လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Nyden ကို ဉီးဆောင်မဲ့သူကတော့…
ဖက်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ မထားတဲ့ FKA Twigs January 31, 2019
Runway တွေပေါ်မှာ ပြန်လည်တွေ့ရတော့မယ့် စူပါမော်ဒယ် Naomi Campbell January 30, 2019
ပွယောင်းတဲ့ ဝတ်စုံကြောင့် ပွဲအပြီးမှာ ဒေါသထွက်နေတဲ့ အဆိုတော် Bebe Rexha January 28, 2019
၂၀၁၉ ရဲ့ ဖက်ရှင် ဘုရင်မလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ Celine Dion January 28, 2019
အသက်ကြီးပေမယ့် လန်းနေဆဲဖြစ်တဲ့ Monica Bellucci ရဲ့ ဖက်ရှင် January 24, 2019
Logo တွေအပြည့်နဲ့ Hailey Baldwin ရဲ့ ဖက်ရှင်အသစ် January 23, 2019
Women’s March ပွဲတော်မှာ အားကစားတီရှပ်လေးနဲ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ Marisa Tomei January 22, 2019
U.S. Media Tour မှာ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ Miss Universe အလှမယ် Catriona Gray January 17, 2019
NBR ဆုပေးပွဲကို Versace ဝတ်စုံနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ စူပါမော်ဒယ် Irina Shayk January 16, 2019
နီယွန်အင်္ကျီဖက်ရှင်နဲ့ LV ပွဲကို တတ်ရောက်လာတဲ့ Bella Hadid January 15, 2019
Lady Gaga ကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်တဲ့ စင်ဒရဲလားဝတ်စုံ January 14, 2019
ကလေးတွေကို LV အိတ်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ Kim Kardashian January 14, 2019
Meghan Markle ကြောင့် နာမည်ကြီးလာတဲ့ စျေးချိုချို ဖိနပ်လေးများ January 11, 2019
ဆယ်နှစ်လောက်ပိုငယ်သွားစေမယ့် အဝတ်အစားရွေးချယ်နည်း January 10, 2019
စူပါမော်ဒယ်လ် Gigi Hadid ရဲ့ အေးစက်စပြုနေပြီဆိုတဲ့ အချစ်ရေး January 9, 2019
လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ Jennifer Lopez January 7, 2019
V – Day အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး စွဲမက်ဖွယ်ရာ Underwear အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Rihanna January 1, 2019
Holiday Party မှာ ငွေရောင်ဝတ်စုံနဲ့ အလှဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Kylie Jenner December 26, 2018
တီရှပ်ခရေဇီတွေအတွက် Ted Baker ရဲ့ Limited edition December 21, 2018
မိတ်ဆုံစားပွဲမှာ အလှဆုံးဖြစ်နေစေမယ့် အဝါရောင် ပွဲတက်ဝတ်စုံ December 20, 2018
Accessories bag Brand Brand News Celebrity Celebrity Fashion Line CFDA Awards Chanel Coach Collaboration Collection comfortable Fashion Fashion Designer Gal Gadot GiGi Hadid Givenchy Golden Globes Gucci H&M Handbag hat Instagram Jeans Kate Middleton Korea Kylie Jenner Louis Vuitton Luxury Meghan Markle Pink Fashion Plus-size Prince Harry and Meghan Markle Reebok Rihanna Selena Gomez shoe Shoes Summer Fashion swimsuits The Best Fashion Instagram Underwear Versace Wedding Dress winter fashion
© 2018 Digital Laboratory Myanmar. All Rights Reserved. | Theme by Spiraclethemes